Wararka Maanta: Arbaco, Mar 14, 2012-Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dalka Kenya iyo Saraakiil uu hoggaaminayo oo maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dalka Kenya iyo Saraakiil uu hoggaaminayo oo maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho Arbaco, Maarso 14, 2012 (HOL) — Wasiirka Arimaha Dibada ee Kenya iyo saraakiil uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray Muqdisho iyagoo kulamo la qaatay xubno ka tirsan dowlada Somalia iyo saraakiisha AMISOM.
Moses Wetangula iyo saraakiisha la socda ayaa waxay kulamadooda diirada ku saarayeen ka mid noqonaysa ciidamada Kenya ee AMISOM, iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha uu rasmi ahaan ugala hadlay ciidamada AMISOM.
Wafdiga Kenyanka ah ayaa waxaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho xubno wasirro ah oo dowladda a tirsan, waxaana markiiba ay bilaabeen inay kulamo la yeesheen madaxda dowlada iyo kuwa Ciidamada Midowga Afrika.
Xukuumada Naorbni ayaa waxay sheegtay inay ka mid noqonayso ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, waxaase ay ku adkeysanaysay inay howlgalka ka wadayso gobolada Koonfureed ee ku dhow xuduudda dalkeedu la leeyahay Soomaaliya.
Ma jiraan warar badan oo laga ogyahay socdaalka, waxaase la sheegay in mararka ay dhammaadaan shirarka madaxda DKMG , saraakiisha AMISOM iyo wafdiga Kenya ka socda uu wasiirka arimaha dibada ee Kenya Wetangula qaban doono shir jaraa'id.
Waa markii labaad oo Wetangula uu safar ku yimaado Muqdisho tan iyo markii ay ciidamada Kenya kasoo gudbeen xadka ay la wadaagaan Soomaaliya sannadkii hore waxaana safarkiisii hore uu ku saleysnaa dambinta caro ay ciidamada Kenya ka muuujiya madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif.Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onlinemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo Tababar u soo xiray cutub Boolis ah oo si gaar ah loo Tababaray 3/14/2012 8:57 AM EST
Arbaco, Maarso 14, 2012 (HOL) — Xarakada Al-shabaab ayaa ka mamnuucday gobollada ay ka taliso hay'adda badbaada dhallaanka ee Save the Children, kaddib warbixin kasoo baxday xafiiska la socodka hay'adaha ajnabiga ah ee Al-shabaab oo loo yaqaanno OSAFA. Xoogagga Al-shabaab iyo Dad Xoolaley ah oo ku Dagaalamay Nawaaxiga Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo 3/14/2012 7:13 AM EST
Arbaco, Maarso 14, 2012 (HOL) — Wararka aynu ka heleyno magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu xoogagga Al-shabaab iyo dad xoolaley ah ku dhexmaray deegaan lagu magacaabo Dhakaajo oo waxyar u jira degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Ra'iisul Waasaraha Itoobiya oo sheegay in ciidamadooda aysan ka baxayn Soomaaliya inta ammaanka laga sugayo 3/14/2012 7:09 AM EST